Ikhabethe Elikhanyayo Futhi Elifudumele Elibheke Ichibi laseShagawa
Phezulu kwegquma elizungezwe amahektha angama-20, kuhlezi indlwana enhle yokulala unyaka wonke. Yakhelwe omunye wezingcweti eziphezulu ze-Ely, zonke izidingo zihlangatshezwana ne-rustic setting kanye ne-twist yesimanje ekhabetheni elinethezekile kakhulu. Udonga lwamafasitela luletha ukukhanya kwelanga. Ukuduma kugingqika phezulu phakathi neziphepho futhi iqhwa liwa kancane ngaphandle ebusika. Ungaphakathi kodwa kuzwakala sengathi umunye nesimo sezulu. Ngempela indawo yokuhlala yothando.
Ikhishi linomoya ohelezayo ongasetshenziswa ne-Bosch dishwasher kanye nebanga legesi eli-5. Inqwaba yezitsha, izitsha zokupheka, izinongo, nesiqandisi esikhulu esengeziwe. Iwasha eyinhlanganisela neyomisa iyatholakala ukuze isetshenziswe.
Igumbi lokugezela elilodwa linesitezi esingezansi esigcwele ishawa enkulu, amathawula amaningi nezinto zangasese ozozisebenzisa. Ithebula labangu-4 lilungele ukudla, noma ukudlala imidlalo. Umnyango oshelelayo uvulelwa kuvulandi omncane ngaphandle onemibono yechibi.
I-loft yekamelo lokulala inkulu inombhede olingana nenkosi nendawo eningi yokufaka umatilasi oqhumayo uma kudingeka. Kukhona i-balcony ngaphandle kwekamelo lokulala lapho umndeni ungajabulela khona ikhofi lawo lasekuseni endaweni ethule.
Umbhede usofa egumbini lokuhlala eliphansi unikeza izinketho eziningi zokulala. Indawo ethokomele yokufunda, ukubuka i-TV, noma ukulala.
Jabulela imvelo ngezindlela eziningi ezizogcina abaqwali bentaba bematasa. Umgodi womlilo ujabulisa kakhulu ukuzijabulisa kwakusihlwa. Inqwaba yezindawo zokupaka kanye nokujika kwenza kube lula ukushayela wehlela emgwaqeni omkhulu.
Letha isikebhe sakho! Ngaphansi kwegquma elide futhi kwesokunxele emgwaqweni omkhulu indawo yechweba. Idokhi nendawo yokupaka ingeyakho. Ukudoba insada kuyatholakala kuleli chibi. Amamayela ambalwa ezansi kune-Lady Bug Resort lapho ungaqasha khona izikebhe ze-pontoon futhi banokwethulwa kwesikebhe.
Kutholwe amamayela ambalwa ngaphambi kwe-Ely ku-169 useduze nedolobhana elijabulisa kakhulu e-Minnesota. I-Ely itholakala emanzini asemngceleni futhi kuyaphithizela ihlobo lonke nabathandi bezikebhe abathutheleka eMecca yezikebhe. Konke okudingayo edolobheni kuyatholakala e-Ely. Izindawo zokudlela, izitolo zegrosa, izitolo kanye nezimpahla zokugqoka.
Le ndawo ilungele imindeni, izithandani, abadobi, kanye nokuhlola. Woza uzophumula, uphumule, futhi wakhe izinkumbulo zomndeni.
4.83(66 okushiwo abanye)
4.83 · 66 okushiwo abanye
Itholakalela izivakashi uma kudingeka